Iyo iPhone Edition yaizobvumidza kumisikidza Siri kuburikidza nemagetsi bhatani | IPhone nhau
Chaizvoizvo kubvira pakatangwa Siri, neiyo iPhone 4s, kudyidzana nemubatsiri weApple zvakachinja zvishoma nezvishoma. Pakutanga, uye zvirinani kusvika parizvino, tinogona kushandisa Siri kuburikidza bhatani repamba, tichiramba rakadzvanywa. Nekuvhurwa kweiyo iPhone 6s uye 6s Plus, Apple yakatibvumidza kumisikidza Siri kuburikidza nemirairo yezwi.
Munguva inopfuura vhiki iyo iPhone 8, iPhone 8 Plus uye iPhone Edition ichaunzwa, yekupedzisira iri iyo ichapa shanduko huru iyo vese vashandisi vanga vakamirira. Nekusina bhatani repanyama kumberi, seanogadzira Guilherme Rambio ave kukwanisa kuziva, iro bhatani remagetsi rinogona kushandiswa kudaidza Siri, kuwedzera pane zviri pachena kushandisa izwi mirairo.
Sekureva kwemugadziri uyu mune tweek yaakaburitsa mazuva mashoma apfuura, awana mune iyo kodhi yeIOS, mimwe mitsara inoratidza kuti iyo iPhone Edition, kana chero chainodaidzwa kunzi, ichatibvumidza kusangana naSiri kuburikidza nebhatani remagetsi, iri kurudyi, uchidhinda kwemasekondi mashoma. Rambo haana kupa chero kodhi uye hapana humbowo hwekuwanikwa uku asi kana tikamira kuti tifunge kuti ine pfungwa dzayo dzese, kunze kwekunge Apple yaita zvekushandisa vhoriyamu kudzora kuteterera kushomeka kwebhatani rekutanga.
Guilherme Rambo akaitwa kuzivikanwa mumavhiki apfuura nemumwe wevagadziri uyo akaburitsa rumwe ruzivo nezve iyo iPhone Edition, yechishanu-chizvarwa Apple TV uye nePodPod kubvira Apple yaburitswa, yekuyedzwa nechishandiso, iyo HomePod firmware pane imwe yemaseva ako. Uyu anovandudza aive achiyedza kudzamara akazowana uye aikwanisa kurodhaunira. Kusvikira rinotevera Gunyana 12 hatisi kuzosiya kusahadzika. MuActualidad iPhone tichaita yakakosha yekutevera-ino yakakosha
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Iyo iPhone Edition yaizobvumira Siri kuti ishandiswe kuburikidza nemagetsi bhatani
Inonakidza, inowedzera uye inoshuvira iyo iPhone 8 uye ayo matsva maficha kuti aunzwe zviri pamutemo uye kuti vashandisi vatange kutaura nezvazvo uye kuferefeta :).
Mubatsiri weAmazon, Alexa, achasvika kuBragi Dash muna Gumiguru